ပြည်တွင်းလေကြောင်းများသို့Atatürkလေဆိပ်ထပ်မံဖွင့်ပါစေ။ | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်ပြည်တွင်းလေကြောင်းများသို့Atatürkလေဆိပ်ထပ်မံဖွင့်ပါစေ
11 / 02 / 2020 34 အစ္စတန်ဘူလ်, အထွေထွေ, လေဆိပ်, လမ်းမကြီး, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ
ကျွမ်းကျင်သူများကမူ Istanbul ရှိလေဆိပ်သုံးခုတွင်လေယာဉ်မှုးဘေးကင်းမှုကိုအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ “ ဒုတိယလေယာဉ်ပြေးလမ်းသည် Sabiha Gökçenအတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ ” "Atatürkလေဆိပ်ကိုလုံးဝပိတ်ပြီးရွှေကြက်ဥဖြူကိုဖြတ်တောက်တာဟာကောင်းပါတယ်။ "
ဖေဖော်ဝါရီ ၅ ရက်က Sabiha Gökçenလေဆိပ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောမတော်တဆမှုသည်လေယာဉ်မှုးအန္တရာယ်နှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်စေခဲ့သည်။ Izmir-Istanbul လေ့လာရေးခရီးကိုတက်စေသော Pegasus ပိုင် Boeing5လေယာဉ်သည်လေယာဉ်ပြေးလမ်းပေါ်တွင်ရပ်။ မရနိုင်ခြင်း၊ DW Turkish မှကျွမ်းကျင်သူများအားအစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်သုံးလေယာဉ်များ၏လုံခြုံမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းခဲ့သည်။
DW Turkish နှင့်ထင်မြင်ချက်ဝေမျှခဲ့သည့်ကျွမ်းကျင်သူအချို့ကသူတို့၏အမည်များကိုမရေးရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ဤကာလအတွင်း Pegasus ရှိယခင်တိုက်လေယာဉ်မှူးဟောင်းBahadır Altan ၏လေယာဉ်မှူးအားအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ အဲလ်တန်သည်မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်ဖုန်းဖြင့်သူပါဝင်ခဲ့သည့်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွင်အစီအစဉ်တွင်ပါ ၀ င်ခဲ့ပြီး“ တိုင်းပြည်ဘရိတ်ကုန်တင်ကားလို” ဆိုသောကြောင့်ပြတ်တောက်သွားသည်။ အယ်လ်တန်သည်တွစ်တာမှအောက်ပါဝါကျများကိုမျှဝေခဲ့သည် -“ နှစ်ပေါင်းများစွာငါပြောခဲ့တာတွေဟာလူများစွာနဲ့မထိခဲ့ဘူး။ ဒီအသိပညာကမတော်တဆဖြစ်မှုကိုတားဆီးပြီးလူတစ်ယောက်ရဲ့ဘ ၀ ကိုကယ်တင်မယ်ဆိုရင်ငါကုန်ကျစရိတ်အမျိုးမျိုးကိုထပ်ခါထပ်ခါပေးရလိမ့်မယ်။ ”
မတော်တဆမှုမတိုင်မီနှစ်ရက်အလိုတွင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ကြီး Cahit Turhan က“ Sabiha Gökçenမှာလေယာဉ်ပြေးလမ်းရှိတယ်။ ဒီလမ်းကြောင်းကအရမ်းပင်ပန်းနေတယ်။ လေယာဉ်ပြေးလမ်းမရှိသည့်အချိန်တွင်လေယာဉ်ပြေးလမ်းကိုညတိုင်းနီးပါးဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။ ” ဤစကားများကဒုတိယလေယာဉ်ပြေးလမ်းမပြီးဆုံးသေးသည့်အကြောင်းကိုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။ Sözcü ဤကိစ္စနှင့် ပါတ်သက်၍ သတင်းစာ၏ဖော်ပြချက်အရတင်ဒါပြီးနောက်ခြောက်လအလို AKA ဆောက်လုပ်ရေး၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် Istanbul လေဆိပ်ကိုလည်ပတ်သည့်ကုမ္ပဏီများမှာ Kalyon ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် Cengiz Holding တို့အတူတူဖြစ်သည်။ ၁၄ လအတွင်းပြီးစီးမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည့်လေယာဉ်ပြေးလမ်းသည် ၄၃ လအတွင်းပြီးစီးခြင်းမရှိသေးဘဲအစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်ကို ၄၂ လအတွင်းပြီးစီးခဲ့သည်။
Sabiha Gökçen၏တစ်ခုတည်းသောမဝေးတော့သည့်လေယာဉ်ပြေးလမ်းဖြစ်ပါသလား။ နှစ်ပေါင်းများစွာ THY တွင်အလုပ်လုပ်ပြီးနောက်ယခုလေယာဉ်သင်တန်းများပေးသောပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီသို့သွားသောအတွေ့အကြုံရှိကပ္ပတိန်လေယာဉ်မှူးသည်လေဆိပ်၏အားနည်းချက်များကိုအောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြသည်။
“ ကြမ်းပြင်ကိုငြီးငွေ့တာ၊ တာယာများသည်သူတို့နှင့်ထိတွေ့ခြင်းမှကာကွယ်ရန်လုံလောက်သောမကောင်းသောလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ ဒါကဆင်းသက်တဲ့အကွာအဝေး၏ကြီးမားသောမသန်မစွမ်းဖြစ်၏။ မြင်သာမှုနည်းသောအခြေအနေများတွင်လည်ပတ်ရန်အတွက်စိန်ခေါ်မှုအများဆုံးဖြစ်သည်။ ” လေယာဉ်တိုင်းတာသည့်ကိရိယာများသည်မလုံလောက်ဟုပြောကြားသောလေယာဉ်မှူးမှလေယာဉ်မှူးကဤအားနည်းချက်များကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ခြင်းရှိ / မရှိ 'အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းအနိမ့်ဆုံးစံနှုန်းများကိုပံ့ပိုးပေးမည့်ကိရိယာများရှိသည်' ကိုထောက်ပြသည်။
လေကြောင်းလိုင်းအလုံအလောက်ရရှိထားပြီးဗဟုသုတရှိသူများထံမှတာဝါများကိုလည်းရွေးချယ်သင့်သည်။ ခရီးဆောင်အိတ်များတင်ဆောင်သည့်ပေါ်တာများပင်ကြုံတွေ့ရမည်။ လေကြောင်းအတွက်နေရာတိုင်းမှာအရည်အချင်းလိုအပ်သည်။ ဆုတောင်းခြင်း၊ တော်ပီဒို၊ လက်ဆောင်ပေးခြင်းဖြင့်ဘယ်တော့မှပြုလုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ပေါ် မူတည်. တူရကီ, နိုင်ငံတော်လေဆိပ်အုပ်ချုပ်ရေး (Sama) တွင်လေဆိပ်, ။ Sabiha Gökçenသည်မူလကာကွယ်ရေး ၀ န်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိHEAŞသို့မူလကစစ်တပ်စက်မှုဇုန်အဖြစ်သတ်မှတ်ရန်စီစဉ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ (Aviation Industries Inc. ) HEAŞအရာရှိများကလေယာဉ်ကွင်းတွင်လေယာဉ်ပျံသန်းမှုလုံခြုံမှုနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိလိုသောကြောင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းအတွက်အဖြေမရရှိခဲ့ပါ။
လေကြောင်းကျွမ်းကျင်သူနှင့်လေကြောင်းလိုင်း ၁၀၁ ဝက်ဘ်ဆိုက်အယ်ဒီတာအဗ္ဗဒူလာနာဂစ်က“ သတင်းအချက်အလက်မရှိဘဲလေယာဉ်ခရီးစဉ်ခွင့်ပြုချက်သည်အန္တရာယ်ရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မပြောနိုင်ပါ။ ”
အနိမ့်ဆုံးချို့ယွင်းမှုကြောင့်ပြင်းထန်သောအကျိုးဆက်များခံစားရလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်မည်သူမျှစွန့်စားလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုသူကထပ်မံပြောကြားခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်ပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ဒုတိယလမ်းကြောင်းဖွင့်သောအခါ၊ ပထမလမ်းကိုပိတ်ပြီးပြုပြင်ရမည်။ အစီအစဉ်ကိုပထမ ဦး ဆုံးပြောရရင် ၂၀၁၂ မှာအဆုံးသတ်မယ်လို့ပြောပြီး ၂၀၁၇ မှာဖြစ်မယ်။
လေဆိပ်သစ်ကိုမနှစ်သက်သောကြောင့် Saberg Gökçenတွင်စုဆောင်းခြင်းနှင့်လေယာဉ်ပြေးလမ်းကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်ဟူသောစိတ်ကူးကို Nergiz ကမလေးစားပါ။ အရပ်ဘက်လေကြောင်းသည်ကမ္ဘာ့အာဏာပိုင်များကသတ်မှတ်ထားသောကန့်သတ်ချက်များထက် ကျော်လွန်၍ မသွားနိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ Sabiha Gökçenသည်ဤအရာကိုမကျော်ဖြတ်နိုင်ပါ။
Hava-Sen ဥက္ကPresident္ဌSeçkinKoçakကလေယာဉ်ခရီးစဉ်လုံခြုံရေးအတွက်အန္တရာယ်မရှိဘူးလို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ လမ်းကြောင်းကိုအလွန်ပြင်းထန်စွာအသုံးပြုသည်ဟု ပြော၍ Koçakက“ မင်းကမင်းရဲ့ထိန်းချုပ်မှုကိုလုပ်ပြီးလမ်းကြောင်းကိုပြန်ဖွင့်လိုက်ပြီ။ ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုပြီးတဲ့နောက်မှာရွှေကိုလက်မှတ်ထိုးတဲ့သူတွေရှိတယ်။ ဒုတိယပြေးလမ်းကိုအမြန်ဆုံးပြီးစီးရမည်ဖြစ်သော်လည်းဂရုစိုက်ရန်မသင့်တော်ဟုမဆိုလိုပါ။ ”
Hava-şş Union ၏အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး Sedat Cangülက“ ကျွန်တော်တို့ဟာလေယာဉ်ပျံသန်းမှုလုံခြုံမှုကိုမပေးနိုင်ပါဘူး။ အသင်း ၀ င်တွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုကျနော်တို့လုပ်နေပါတယ်။
လေဆိပ်အသစ် - လေယာဉ်ပြေးလမ်းရဲ့ညှဉ်းဆဲမှုမှားသလား။
စီမံကိန်းအဆင့် မှစ၍ စ၍ အငြင်းပွားဖွယ်ရာဖြစ်ခဲ့ပြီးတတိယမြောက်လေဆိပ်ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်မေလတွင်စတင်လည်ပတ်ခဲ့သည်။ တရားဝင်အမည်ရှိ Istanbul လေဆိပ်ကိုလည်းလေယာဉ်ပျံသန်းမှုလုံခြုံမှုအတွက်ဝေဖန်ခဲ့သည်။ လေယာဉ်ပြေးလမ်းများသည်ဝေဖန်မှုများနှင့်သတိပေးချက်များအလယ်တွင်ရှိသည်။ ရာသီဥတုဆိုးရွားသည့်အချိန်သည်ဆောင်းကာလမဖြစ်သော်လည်းလေယာဉ်အမြောက်အများသည် luorlu သို့ Bursa သို့ပင်ပြေးရန်လိုအပ်သည်ဟုကျွမ်းကျင်သူများကပြောကြားသည်။
နှစ်ပေါင်း3ကျော်ကသူ၏အတွေ့အကြုံနှင့်အတူလေယာဉ်ခရီးစဉ်လုံခြုံမှုကိုအကဲဖြတ်တစ် ဦး ကကပ္ပတိန်လေယာဉ်မှူးသူက "သူ၏တည်နေရာ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဘေးအန္တရာယ်" ဟုခေါ်ဝေါ်သောအသစ်သောလေဆိပ်, မြောက်ဘက်နှင့်စိုထိုင်းသောလေတိုက်မှဖွင့်လှစ်သောလေယာဉ်ပြေးလမ်းအပြင်ဘက်တစ် ဦး လေတိုက်ယူပြီးသူကပြောသည်ပင်လယ်နက်နှင့်အဘယ်သူ၏တရားသူကြီးလမ်းညွှန်များမှားဖြစ်ကြသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်သူကသူ့ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်လေရဟတ်စက်အမြောက်အမြားရှိသည်ဟုပြောကြားခဲ့ပြီး“ တည်နေရာရွေးချယ်မှုကမှားတယ်။ အမြဲတမ်း 5-XNUMX ဒီဂရီ Istanbul နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အအေးဖြစ်၏ ရေခဲနဲ့မြူတွေအများကြီးရှိတဲ့နေရာ။ သို့သော်ထိုထက်ကျော်လွန်သောနှုန်းမှာကျောက်မီးသွေးတွင်းများဖြစ်သည်။ မြေဆီလွှာ၏ဖွဲ့စည်းပုံသည်ရေကိုစုပ်ယူရန်နှင့်ပြိုလဲရန်အတွက်သင့်တော်သည်။ “ ကားရပ်နားရာနေရာများမှာပြိုကျမှုတွေစတင်နေပြီ။
သူတို့ကAtatürkလေဆိပ်ကိုအနည်းဆုံးနွေရာသီတစ်ခုနှင့်ဆောင်းရာသီသစ်မှာစတုရန်းသစ်မှာထားစေချင်တယ်လို့ရှင်းပြပြီးလေယာဉ်မှူးက "ငါတို့ဘာကြောင့်ပိတ်နေကြသလဲ။ ၎င်းသည်လက်ရှိတွင်လမ်းကြောင်းသုံးခုရှိသောစတုရန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးလိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သည်။ ငါတို့တွေအများကြီးပြောခဲ့တယ်၊
လေကြောင်းကျွမ်းကျင်သူအဗ္ဗဒူလာနာဂစ်ကတည်နေရာရွေးချယ်မှုအပေါ်အလွန်အမင်းစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမရှိပါ။ အိုဆာကာ၊ ဟောင်ကောင်၊ တောင်ကိုရီးယားတို့မှဥပမာများ ပေး၍ ပင်လယ်အထက်တွင်တည်ဆောက်ထားသည့်လေဆိပ်များရှိကြောင်းနှင့်ကမ်းခြေမှ ၅ ကီလိုမီတာအကွာအဝေးတွင်“ မှားယွင်းတဲ့နေရာမရှိဘူး။ ဆောက်လုပ်ရေးနည်းပညာသည်သင်ဖြစ်လာနိုင်သည့်နေရာတိုင်းတွင်လုပ်နိုင်သည်။ ကုန်ကျစရိတ်သာတက်သွားလိမ့်မယ်။ လေနှင့်ပတ်သက်သည့်ဝေဖန်မှုများကိုသဘောမတူသည့် Nergiz ၏အဆိုအရလေယာဉ်ဆင်းသက်မှုတွင်လေအားလျှပ်စစ်ပြခြင်းသည်ကောင်းသည်ဟုဆိုပါသည်။ တစ်ခုတည်းသောအခြေအနေမှာကြီးစိုးသောလေများကိုဆုံးဖြတ်ရန်နှင့်လေယာဉ်ပြေးလမ်း၏လမ်းကြောင်းကိုအညီပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ "ကျနော်တို့မှားတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့်လမ်းကြောင်းတွေရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ကတော့မမှားပါဘူး" လို့သူကပြောပါတယ်။
“ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအများကြီးလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာသော့ချက်ကျဖို့အခွင့်အရေးရှိလား။ ငါအဲဒီမှာပြုမိမခံခဲ့ရအလိုရှိ၏, ငါစမတ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်နိုင်မည်ဟုဆန္ဒရှိပေမယ့်မပေးခဲ့ပါဘူး။ Sabiha Gökçenသည်ကြီးထွားသင့်သည့်စတုရန်းပေဖြစ်ပြီးတင်းတင်းမာမာမရှိဘဲ Istanbul လေဆိပ်၏စွမ်းရည်ကိုဖြည့်ရန်ကြိုးစားရန်လိုအပ်သည်။ ချို့ယွင်းချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အစီအမံများလိုအပ်သည်။ သူကနှောင့်နှေးသည်းခံမထားဘူး တစ်မိနစ်ပိုသောလောင်စာသည်နှစ်စဉ်ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာကိုဆိုလိုသည်။
“ လေဆိပ်နှစ်ခုစလုံးဟာအများဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့အလုပ်လုပ်သင့်တယ်” ဟုသူကပြောခဲ့သည်။
Koçak, Nergiz နှင့်ကပ္ပတိန်လေယာဉ်မှူးအားလုံးကသူတို့၏ထင်မြင်ချက်ကိုမျှဝေသော Ataturk လေဆိပ်သည်ပြည်တွင်းပျံသန်းမှုများအတွက်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ကြောင်းပြောကြားသည်။ ကုန်တင်လေယာဉ်များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်ပုဂ္ဂလိကလေယာဉ်များအတွက်အသုံးပြုသောinရိယာတွင်ပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်းများကိုပြန်လည်စတင်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုပြောကြားပြီးကျွမ်းကျင်သူများကလန်ဒန်၊ နယူးယောက်နှင့်ပဲရစ်စသည့်မြို့ပြနေရာများတွင်လေဆိပ်များရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
"လုံးဝရွှေငန်းကိုပယ်ဖြတ်," နာကိသုဆိုသည်ကား, သူကတူရကီထိုကဲ့သို့သောbonkörlükစေတဲ့အနေအထားအတွက်စီးပွားရေးအရမရကပြောပါတယ်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆိပ်ကမ်း၏အချို့သောအစိတ်အပိုင်းများကိုကျင်းပခဲ့သည်ကိုသူက“ ပြည်တွင်းဆိပ်ကမ်းတစ်ခုရှိတယ်၊ ပြည်တွင်းပျံသန်းမှုအကန့်အသတ်ရှိနေတယ်၊ ​​ခရီးသည်နှစ် ဦး စလုံးကအနားယူပြီး၊ အချိန်ဖြုန်းမနေဘူး၊
ယာဉ်အသွားအလာကိုအန္တရာယ်ကင်းစွာသယ်ဆောင်နိုင်ရန်လေကြောင်းထိန်းချုပ်မှုကိုစီစဉ်သောအခါကျွမ်းကျင်သူများကလေဆိပ်သုံးခုကိုနည်းပညာပိုင်းအရအသုံးပြုနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။ ၎င်းကို DHMI နှင့် IGA တို့အကြားသဘောတူညီမှုဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်သည်။ ” (Deutsche Welle Turkish)
သငျသညျ Corum မီးရထားစီမံကိန်း Acceleration, လေဆိပ်အရာကိုသင်ရုံ
အသုံးပြုမှုလေပိုင်နက်ဘူလ်ဂေးရီးယား, တူရကီဖို့လေဆိပ်သို့ 3. ပြည်တွင်းလေကြောင်းခရီးစဉ်များ ...
CHP Yedekc: Atatürkလေဆိပ်မြေ "Atatürkစီးတီးပန်းခြံ" Have ဖြစ်ရမည်
3 အတွက် Izmir တိုက်ရိုက်လေကြောင်းခရီးစဉ်များ။ အဆိုပါကတိကဝတ်ထိခိုက်လေဆိပ်ပေးထား
လေယာဉ်စမ်းသပ်ပျံသန်း Start! အစ္စတန်ဘူလ် pas အတွင်းပထမဆုံးလေဆိပ်သစ်
ဖွင့်လှစ်အကြောင်းကို Siirt လေဆိပ်ပျံသန်းမှုနှင့်အတူ2နှစ် off
Basmane ရထားဘူတာ Ataturk အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် Project မှလေယာဉ်ပြေးလမ်းအတွက် Izmir မှAtatürkရဲ့ဆိုက်ရောက်
Ataturk လေဆိပ်ကနေDHMİ3။ သူကလေဆိပ်မှရွှေ့ဖို့ခလုတ်ကိုဖိ
တတိယလေဆိပ်ဖွင့်လှစ်, Ataturk လေဆိပ်ပိတ်လိုက်ပါလိမ့်မည်